Cinga Ngohlobo Lomntu Omele Ube Lulo | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“Luhlobo luni lwabantu enifanele nibe lulo ngokuphathelele ihambo engcwele nezenzo zozinikelo lobuthixo!”—2 PET. 3:11.
Umntu umele abe njani ukuze amkeleke kuThixo?
Yintoni onokuyenza ukuze ulondoloze ulwalamano lwakho noYehova?
1, 2. ‘Luhlobo olunjani lwabantu esimele sibe lulo’ ukuze samkeleke kuThixo?
YINTO eqhelekileyo ukuzixhalabisa ngendlela abasijonga ngayo abanye. Noko ke, eyona nto simele sizixhalabise ngayo thina maKristu, yindlela esijongwa ngayo nguYehova. Kaloku, ngoYena mkhulu kwindalo iphela yaye ukuye “umthombo wobomi.”—INdu. 36:9.
2 Ebethelela ukubaluleka ‘kohlobo esimele sibe lulo’ emehlweni kaYehova, umpostile uPetros usichazela into efunekayo “ngokuphathelele ihambo engcwele nezenzo zozinikelo lobuthixo.” (Funda eyesi-2 kaPetros 3:11.) Ukuze samkeleke kuThixo, “ihambo” yethu imele ibe ngcwele, sicoceke—ngokuziphatha, engqondweni nangokomoya. Simele sixakeke ‘nazizenzo zozinikelo lobuthixo’ soyike uThixo size sinyaniseke kuye. Ngoko ke, ukuze sikholise uThixo asipheleli nje kwizenzo, kodwa simele simkholise nangendlela esivakalelwa ngayo. Ekubeni uYehova ‘engumgocagoci wentliziyo,’ uyasazi xa sinehambo engcwele naxa sizinikele kuye ngokupheleleyo.—1 Kron. 29:17.
3. Yiyiphi imibuzo esimele sizibuze yona ngokuphathelele ulwalamano lwethu noThixo?
3 Eyona nto ifunwa nguSathana uMtyholi, kukuba uThixo angakholiswa sithi. Wenza konke okusemandleni ukuze sityeshele ulwalamano esinalo noYehova. Akacingi kabini xa esebenzisa ubuxoki nenkohliso ukuze asilukuhlele ekubeni simshiye uThixo wethu. (Yoh. 8:44; 2 Kor. 11:13-15) Ngoko, kuya kuba bubulumko ukuzibuza oku: ‘USathana ubakhohlisa njani abantu? Ndingalukhusela njani ulwalamano lwam noYehova?’
4. Kwilinge lakhe lokusahlukanisa noThixo, yiyiphi indawo azijolisa kuyo iintolo zakhe uSathana, yaye ngoba?
4 Umfundi uYakobi uthi: “Ngamnye ulingwa ngokutsalwa nokuwexulwa ngumnqweno wakhe. Wandule ke umnqweno, xa uthe wakhawula, uzale isono; isono, xa sithe safezwa, sivelisa ukufa.” (Yak. 1:14, 15) Kwilinge lakhe lokusahlukanisa noThixo, iintolo zakhe uSathana uzijolisa kowona mthombo weminqweno yethu—intliziyo.
5, 6. (a) Ziziphi iindlela ezisetyenziswa nguSathana ukonakalisa iintliziyo zethu? (b) Ziziphi iindlela zokurhwebesha ezisetyenziswa nguSathana ukonakalisa iminqweno yentliziyo yethu, ibe uyincutshe kangakanani ekuzisebenziseni?
5 Ziziphi iindlela ezisetyenziswa nguSathana ukonakalisa iintliziyo zethu? IBhayibhile ithi: “Ihlabathi liphela lisemandleni ongendawo.” (1 Yohane 5: 19) Esinye sezixhobo ezisetyenziswa nguSathana ‘zizinto ezisehlabathini.’ (Funda eyoku-1 kaYohane 2:15, 16.) Kangangamawaka eminyaka, uMtyholi uye wayichula kakuhle imeko esingqongileyo. Ekubeni siphila kweli hlabathi, simele sihlale silumkele amaqhinga akhe achuliweyo.—Yoh. 17:15.
6 USathana usebenzisa iindlela ezichulelwe ukonakalisa iminqweno yentliziyo. Umpostile uYohane uchaza iindlela ezintathu asirhwebesha ngazo uSathana: (1) “inkanuko yenyama,” (2) ‘inkanuko yamehlo,’ (3) “nokuqhayisa ngezinto zobu bomi.” Zezo ndlela kanye awazisebenzisayo uSathana xa wayelinga uYesu entlango. Namhlanje uSathana sele eyincutshe kuba unexesha elide esebenzisa le migibe, ujonga utyekelo lomntu ngamnye. Ngaphambi kokuba siqwalasele izinto esinokuzenza ukuze sizikhusele kule migibe, makhe sihlole indlela awaphumelela ngayo uMtyholi ekurhwebesheni uEva kodwa watsho phantsi kuNyana kaThixo.
“Ngumnqweno wenyama” owafaka uEva engxakini (Funda isiqendu 7)
7 Wonke umntu kufuneka afumane ukutya ukuze aphile. UMdali wayila umhlaba ukuze uvelise intabalala yokutya. USathana unokusebenzisa loo mnqweno wemvelo ukuze asityekise ekwenzeni ukuthanda kukaThixo. Makhe sibone indlela awakwenza ngayo oko kuEva. (Funda iGenesis 3:1-6.) USathana waxelela uEva ukuba wayengayi kufa xa enokutya ‘kumthi wokwazi okulungileyo nokubi,’ nto nje wayeya kusuka afane noThixo. (Gen. 2:9) Eyona nto yayithethwa nguMtyholi kukuba kwakungeyomfuneko ukuba uEva athobele uThixo ukuze aphile. Obunjani bona ubuvuvu! Emva kokuva oko, kwafuneka uEva akhethe phakathi kwezi zinto zimbini: Abhebhethe, okanye acingisise ngoko wayekuxelelwa de kumongamele. Nakuba wayenokutya kuyo yonke eminye imithi ekuloo myezo, wakhetha ukuphulaphula uSathana ngokuphathelele umthi osemyezweni phakathi, waza ke “wathabatha eziqhameni zawo waza wadla.” Ngoko ke, uSathana waphumelela ukutyala entliziyweni yakhe umnqweno wento eyalelweyo nguMdali wakhe.
UYesu akazange avumele kwanto iza kumphazamisa (Funda isiqendu 8)
8. USathana wazama njani ukurhwebesha uYesu esebenzisa “inkanuko yenyama,” ibe kutheni engazange aphumelele nje?
8 USathana wasebenzisa kwaelo qhinga xa wayelinga uYesu entlango. Emva kokuba uYesu ezile ukutya kangangeentsuku eziyi-40 nobusuku bazo, uSathana wazama ukumlinga ngaloo mnqweno wokutya wayenawo uYesu. Wathi: “Ukuba ungunyana kaThixo, yithi kweli litye malibe sisonka.” (Luka 4:1-3) UYesu kwafuneka akhethe phakathi kwezinto ezimbini: Ukusebenzisa amandla akhe angummangaliso ukuze anelise iphango okanye angawasebenzisi. UYesu wayesazi ukuba akamele asebenzise loo mandla ngenjongo nje yokuzanelisa. Nakuba wayelambile, ukwanelisa iphango lakhe kwakungabalulekanga ngaphezu kokulondoloza ulwalamano lwakhe noYehova. Wathi kuSathana: “Kubhaliwe kwathiwa, ‘Akaphili ngasonka sodwa umntu, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaYehova.’ ”—Luka 4:4, umbhalo osemazantsi kweneembekiselo.
9. Libonisa ntoni ibinzana elithi ‘inkanuko yamehlo,’ ibe uSathana wazama njani ukurhwebesha uEva ngalo?
9 UYohane ukhankanya ‘inkanuko yamehlo,’ njengesinye isilingo. Eli binzana libonisa ukuba umntu unokuqala ukunqwenela into ethile ngokusuka nje ayijonge. KuEva, uSathana wasebenzisa lo mnqweno, wathi: “Amehlo enu aya kuvuleka.” Okukhona uEva ewujonga loo mthi walelweyo, kwaba kokukhona ewunqwenela ngakumbi. Wabona ukuba “wawulangazeleleka emehlweni.”
10. USathana wayisebenzisa njani ‘inkanuko yamehlo’ ukuze arhwebeshe uYesu, ibe wasabela njani?
10 Kuthekani ngoYesu? USathana “wambonisa [uYesu] zonke izikumkani zomhlaba omiweyo ngephanyazo; yaye uMtyholi wathi: ‘Ndiza kukunika lonke eli gunya nozuko lwazo.’ ” (Luka 4:5, 6) UYesu wayengenakuzibona ngokoqobo ngephanyazo zonke ezo zikumkani zomhlaba, nto nje wabona umbono wozuko lwazo. USathana umele ukuba wayecinga ukuba uYesu uza kuthabatheka lolo zuko. Ephelelwe ziintloni, wathi kuYesu: “Ukuba wenza isenzo sonqulo phambi kwam, konke kuya kuba kokwakho.” (Luka 4:7) Wayezibhudile izingqi ngokucinga ukuba uYesu wayenokwenza oko. Engaphozisanga maseko, wathi: “Kubhaliwe kwathiwa, ‘NguYehova uThixo wakho omele ­umnqule, yaye nguye yedwa omele unikele inkonzo engcwele kuye.’”—Luka 4:8.
‘UKUQHAYISA NGEZINTO ZOBU BOMI’
11. USathana wamlukuhla njani uEva?
11 Xa ethetha ngezinto zehlabathi, uYohane wakhankanya “nokuqhayisa ngezinto zobu bomi.” Kakade ke, xa uAdam noEva yayingabo kuphela emhlabeni babengekho abantu abanokukwazi ‘ukubaqhayisela ngezinto zobu bomi.’ Kodwa babenalo ikratshi. Xa elukuhla uEva, uSathana wathi uThixo ubabandeza nto ithile ilungileyo. UMtyholi wamxelela ukuba mhla nje watya ‘kumthi wokwazi okulungileyo nokubi, wayeza kuba njengoThixo, azi okulungileyo nokubi.’ (Gen. 2:17; 3:5) Ngokutsho, uSathana wayesithi uEva uza kukwazi ukuzimela geqe kuYehova. Likratshi elamenza akholelwe obo buxoki. Watya kuloo mthi, ekholelwa ukuba wayengayi kufa ngokwenene. Kwathi kanti uzibhudile izingqi!
12. Liliphi elinye iqhinga aweza nalo uSathana ukuze ahende uYesu, ibe uYesu wasabela njani?
12 Ngokwahlukileyo kuEva, uYesu wasimisela owona mzekelo ubalaseleyo wokuthobeka! USathana weza nelinye iqhinga lokumhenda, kodwa nalapho uYesu wakhaba ngawo omane nkqu nengcamango yokuvavanya uThixo. Likratshi elalinokumenza amvavanye! Impendulo kaYesu yayicacile kwaye ingqalile: “Kuthiwa, ‘Uze ungamvavanyi uYehova uThixo wakho.’”—Funda uLuka 4:9-12.
SINOKULIKHUSELA NJANI ULWALAMANO LWETHU NOYEHOVA?
13 Nanamhlanje, uSathana usasirhwebesha ngaloo ndlela wayesenza ngayo kuEva noYesu. Ukuze asihende ‘ngenkanuko yenyama,’ uMtyholi usebenzisa ihlabathi lakhe ukukhuthaza ukuziphatha kakubi nokuzingxala ngokutya nokusela. Ngephonografi, ngakumbi kwi-Intanethi ubambisa abo bangaphaphanga aze abarhwebeshe ‘ngenkanuko yamehlo.’ Ngesilingo sokuthanda izinto eziphathekayo, igunya nodumo, ubambisa abo banekratshi nabathanda ‘ukuqhayisa ngezinto zobu bomi’!
Yiyiphi imigaqo yeZibhalo efanele ithi qatha xa ukwiimeko ezifana nezi? (Funda isiqendu 13, 14)
13, 14. Chaza ezinye indlela uSathana asirhwebesha ngazo namhlanje.
14 ‘Izinto ezisehlabathini’ zifana nqwa nezabatha zomlobi. Zinomtsalane, kodwa zifihle umgibe. USathana usebenzisa ezo zinto sicinga ukuba ziyimfuneko ukuze saphule imithetho kaThixo. Noko ke, loo migibe ingacacanga uyenzele ukuphembelela iminqweno esinayo nokonakalisa intliziyo yethu. Ufuna sicinge ukuba ukwanelisa iintswelo zethu nokuzonwabisa zezona zinto zibaluleke ngaphezu kokwenza ukuthanda kukaThixo. Ngaba uza kuphumelela kuthi?
15. Sinokumxelisa njani uYesu ekuxhathiseni imigibe kaSathana?
15 Nakuba uEva wanikezelayo ekuhendweni nguSathana, uYesu waxhathisa kwema ngaye. Sihlandlo ngasinye wayemphendula ngeSibhalo, esithi: “Kubhaliwe kwathiwa” okanye, “Kuthiwa.” Ukuba sikukhuthalele ukufunda iBhayibhile, siya kuqhelana neZibhalo sitsho sikwazi ukukhumbula iivesi ezinokusinceda sicinge kakuhle xa silingwa. (INdu. 1:1, 2) Ukukhumbula imizekelo eseBhayibhileni yabantu abathembekileyo ababenyanisekile kuThixo kuya kusinceda sibaxelise. (Roma 15:4) Ukumoyika uYehova, sithande oko akuthandayo ngoxa sithiya oko akuthiyileyo, kuya kusilondoloza.—INdu. 97:10.
16, 17. Yiyiphi imbembelelo anokuba nayo ‘amandla ethu engqiqo’ kuhlobo lwabantu esiba ngabo?
16 Umpostile uPawulos usikhuthaza ukuba sisebenzise ‘amandla ethu engqiqo’ ukuze indlela yethu yokucinga iphenjelelwe nguThixo, kungekhona lihlabathi. (Roma 12:1, 2) Egxininisa ukubaluleka kokulawula izinto esizicingayo, uPawulos wathi: “Sibhukuqa iingcinga nayo yonke into ephakamileyo ephakanyiswa nxamnye nolwazi lukaThixo; yaye sithimba zonke iingcamango, sizenze zithobele uKristu.” (2 Kor. 10:5) Izinto esizicingayo ziluphembelela gqitha uhlobo lwabantu esiba ngabo, ngoko kufuneka ‘sihlale sicinga’ ngezinto ezakhayo.—Fil. 4:8.
17 Asinakulindela ukuba siya kuba ngcwele ukuba sihlala sineengcamango neminqweno engafanelekanga. Simele simthande ‘ngentliziyo ehlambulukileyo’ uYehova. (1 Tim. 1:5) Phi ke, intliziyo inenkohliso kangangokuba side singaqondi naxa sele siphenjelelwe ngamandla ‘zizinto ezisehlabathini.’ (Yer. 17:9) Ngoko ke, simele ‘sihlale sizivavanya enoba siselukholweni kusini na, sihlale sizicikida oko sikuko thina ngokwethu’ ngokunyaniseka sizihlole koko sikufunda eBhayibhileni?—2 Kor. 13:5.
18, 19. Kutheni simele sizimisele ukuba luhlobo lwabantu uYehova afuna sibe lulo?
18 Enye into enokusinceda sixhathise ‘izinto ezisehlabathini’ kukukhumbula la mazwi aphefumlelweyo kaYohane: “Ihlabathi liyadlula nenkanuko yalo, kodwa lowo wenza ukuthanda kukaThixo uhleli ngonaphakade.” (1 Yoh. 2:17) Le nkqubo kaSathana ikhangeleka ngathi ayiyi ndawo yaye yeyokwenene. Kodwa ke inyaniso kukuba ngenye imini iza kuphela. Ukukhumbula ukuba ayikho into esinokuyifumana kweli hlabathi likaSathana eya kuhlala ngonaphakade, kuya kusinceda singakhohliswa yimigibe yakhe.
19 Umpostile uPetros usibongoza ukuba sibe luhlobo lwabantu akholiswayo ngabo uYehova njengoko ‘sibulindile yaye sibukhumbula ubukho bemini kaYehova, ekuya kuthi ngayo amazulu atshe ngumlilo achithakale, neziqalelo ezishushu kakhulu zinyibilike!’ (2 Pet. 3:12) Selikufuphi gqitha ixesha lokuba loo mini igaleleke, ibe uYehova uya kutshabalalisa kwanto inokuthanani neli hlabathi likaSathana. De kube ngoko, uSathana useza kuqhubeka esebenzisa ‘izinto ezisehlabathini’ ukuze asilinge, njengokuba wenzayo kuEva noYesu. Asimele sifane noEva sizame ukwanelisa iminqweno yethu. Ukwenjenjalo kuya kuthetha ukuba simenza uthixo wethu uSathana. Masixelise uYesu owaxhathisa kwema ngaye, nakuba wayelingwa ngezinto ezibonakala zinqweneleka. Ngamana singazimisela ukuba luhlobo lwabantu uYehova afuna sibe lulo.